Onye na-enyere aka ịzụ ahịa ịzụ ahịa: Nnukwu Ọganihu na ECommerce? | Martech Zone
Ọ bụ 2019 ma ị banye n'ụlọ ahịa ahịa brik na-ngwa agha. Mba, nke a abụghị egwuregwu, nke ahụ abụghịkwa ntụpọ. ECommerce na-aga n'ihu na -ewekarịa nnukwu nri site na achịcha ahịa, mana a ka nwere ihe ndị na-enweghị atụ mgbe a bịara n'ihe ọhụrụ na ịdị mma nke brik na ngwa agha. Otu n'ime oke ala ikpeazụ bụ ọnụnọ nke enyi na enyi, onye enyemaka ụlọ ahịa na-enyere aka.
"Kedu ka m ga-esi nyere gị aka?" bụ ihe anyị na-anụkarị ma anyị banye n'otu ụlọ ahịa, anyị ewerekwa ya na ọ dị mkpa. Maka ebe nrụọrụ weebụ eCommerce ọ bụla ebupụtara nke ọma gụnyere atụmatụ UI-enyi dịka AI na-arụzu ma ọ bụ nsonaazụ achicha, enwere ọtụtụ ndị ọzọ na, iji kwuo okwu, na-a completelyụ kpamkpam. Ọ ga-abụ chi dị mma ma ọ bụrụ na onye nwere ụlọ ahịa nwere enyi na enyi pụta wee jụọ ajụjụ ole na ole gbasara ihe m na-achọ. Enwere ike ịme ya n'ịntanetị? Isiokwu a ga-ele anya ohere ndị dịnụ ma kesaa ụfọdụ ngwaọrụ, ndụmọdụ, na ndụmọdụ.
Etu esi edozi ibe gi
Ọ bụ ezie na ndị na-enyere aka ịzụ ahịa na-aga n'ihu, mmemme nke ga-eche na ndị ahịa gị bụ mmadụ erutebeghị - ma ọ bụ na mmefu ego. Agbanyeghị, ọ naghị esiri ike ijikọ ọtụtụ ngwa dị iche iche iji nye ndị ọbịa gị uto nke atụmatụ kacha mma nke onye enyemaka ịzụ ahịa na-enweghị oke splurge.
Na Facebook Messenger, Sephora nwere ike ime ya niile.
Chatbots abụghị ihe ọhụụ, mana UX ha kawanye mma na ngwa ha agbasaala. Bọchị ndị a, ọ dị mfe ịmepụta ihe na ijikọ chatbots n'ime arụmọrụ gị.
Ozi Facebook: Maara na ndị ahịa gị na-agagharị na ntanetị Facebook ha ụbọchị ọkara; kedu ihe ị ga-eji hapụ ngwa ahụ mgbe ha chọrọ ihe n’aka gị? Inwe sistemụ na-adị mfe ịnweta dị ka ịnwe onye enyemaka na - akpọ - ma kama ịnyagharịa na webụsaịtị gị, izipu gị na Facebook na-eme ka ọ dị gị ka ha na-agwa mmadụ okwu. Sephora na-eduga ụgwọ n'ọdịnihu n'ọdịnihu na ụwa mara mma, yana atụmatụ abụọ mkparịta ụka dị iche iche dị na Facebook Messenger na-eji Assi.st: Ndị ahịa nwere ike izi ha ozi ka ha nwee ọhụhụ na onye ndụmọdụ mara mma, ma ọ bụ na ha nwere ike ịnweta ndụmọdụ banyere ịzụta mkpebi.
Tụ ihe oriri maka nnara ma ọ bụ nnyefe ewerekwala na Facebook Messenger ụwa. Starbucks bụ naanị ozi ole na ole site na ịnwe nnweta na ụlọ ahịa gị, Dominos nwere ike ịgwa gị kwa ụbọchị Pizza, na Pizza Hut na-enye gị ohere ịmechaa ahụmịhe zuru oke na-ahapụghị Facebook. A na-eme ha niile site na iji nkata dị iche iche nwere otu ahụmịhe dị ka mgbe gị na enyi gị na-akparịta ụka.
Ndị Ahịa: i
Iji nkata iji nyere ndị ahịa gị aka ịjụ ajụjụ gbasara ndị ahịa dị ka ịnwe enyemaka nke onye na-adịghị ehi ụra. Ha agaghị enwe ike ijikwa nnukwu ihe ahụ, mana imepụta obere ihe nwere ike iburu ibu n'ubu gị. Akpọrọ aha ya nke ọma, ọrụ dị ka Nkata Bot enwere ike iji ya rụọ ọrụ nke gị, ajụjụ, na omume gị - ọ bụghị ọkwa Bandersnatch nke mgbagwoju anya, mana ọ na-arụ ọrụ ahụ. O nwere oke nloghachi, kwa: N’ule, nkata bot nwere ike dozie 82% nke mmekọrịta na-enweghị mkpa maka onye ọrụ mmadụ.
MongoDB nwere nkata ọrụ ndị ahịa dị ka nke a, nke nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na onye ọbịa bụ onye ruru eru site na ịjụ ajụjụ ole na ole, ma ọ bụrụ na ha bụ, duru ha gaa ahịa ahịa ziri ezi. Sephora na-eme ka ọhụụ ọzọ na mbara egwuregwu a - ọ tụrụ gị n'anya na ha nọ na egwuregwu egwuregwu ndị ahịa chatbot? Na weebụsaịtị ha, ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịjụ ajụjụ ndị bụ isi - ị nwedịrị ike ịnweta ndụmọdụ sitere na AI. Ndị ahịa nwere ike i scanomi foto nke ihe ịchọ mma etinyere na ha masịrị ebe ọ bụla wee nweta ndụmọdụ maka ihe ị ga-eme iji lelee anya ahụ.
Ozi ịntanetị nkeonwe
Kwenye ndị ọbịa gị ịnweta ozi ịntanetị n'aka gị abụghị ọrụ dị mfe - gịnị ma ọ bụrụ na chatbot nwere ike ime ka ha kwenye maka gị, wee zigara ha ihe ha chọrọ ịhụ? Nke ahụ bụ ihe botC TechCrunch na-azọrọ ime, na-enweghị mbọ ọ bụla nke onye debanyere aha ọ bụla. Mgbe onye na - agụ ya debanyere aha maka ozi ederede site na iji ọrụ chatbot, sọftụwia AI ya na - edekọ ụdị akụkọ ha gụrụ ma zigara ha naanị isiokwu ọ chere na ha ga - enwe mmasi.
Mee ka StitchFix gbalịa ịmara gị karịa ka ị maara onwe gị
Iwuli ya dika ahia gi
Ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na ndị ahịa gị na-eche mgbe niile dịka a ga-asị na ha na-enweta enyemaka ahaziri iche n'aka gị? E nwere ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ole na ole jisiri ike na-ewulite mmetụta nke onye inyeaka ahaziri iche na usoro azụmaahịa ha.
Ndenye aha igbe
Akụkụ nke akụkụ nke igbe ndenye aha na-aga nke ọma na-achọpụta ihe ndị ahịa gị chọrọ iji zigara ha ihe ziri ezi. StitchfixIhe nlere di iche-iche n’eme ka ndi ahia bia gwa Stitchfix ihe ha masiri ha, ya mere Stitchfix nwere ike zigara ha ihe ha masiri ha. Ọ bụ njiri mara nke a nke pụrụ iche pụrụ iche, dịka onye ọ bụla jikọtara ya na onye stylist onwe ya mgbe ọ dejupụtara ajụjụ dị mkpa. Ndị ahịa ahụ na-akwụ ụgwọ ịdebanye aha, nke a na-ewepụ ma ọ bụrụ na ha edebe ma ọ dịkarịa ala otu n’ime ihe ndị ezitere ha.
Agbanyeghị, ọ nweghị azụmaahịa nwere ike ịba uru na ndị stylists onwe ha na-elele profaịlụ nke ọ bụla na nhazi site na nnukwu katalọgụ nke ihe. Hummụ mmadụ na-atụ egwu ngwa ngwa ma na-arụ ọrụ nke ọma n'ọtụtụ data na ime mkpebi - nke ahụ bụ ọrụ maka ọgụgụ isi. AI bu etu Stitchfix siri gbue nke oma, ya na algorithm ya na elele onodu, nha, nzaghachi, na ochicho iji mechie ndeputa nke aro maka onye stylist ka o hotara. AI na-enyere onye stylist aka, onye na-enyere onye ahịa aka na nkwekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ọ ga-amasị gị…
A ezi onye stylist maara ihe na-amasị gị na ihe ị na-azụta, na-eji na ozi na-atụ aro ihe ndị ọzọ ị nwere ike amasị. Ọ naghị esiri ọgụgụ isi ike i mimomi “ọ bụrụ na ị masịrị nke ahụ, ị ​​nwere ike ịmasị nke a” aro ndị ahaziri. Ọkara agha ahụ na-eme ka ndị ahịa debanye aha na ị nwere ike ịnakọta data ha, ọkara ọzọ na-ejikwa data ahụ n'ụzọ dị irè. Kedu onye na-arụ nnukwu ọrụ nke a? I kwutere ya. Amazon.
Amazon maara na 60% nke oge ahụ, onye na-ele onye na-eme kọfị Keurig elelewo K-Cups ndị nwere ike ịnwụ, ma eleghị anya iko n'ezie iji drinkụọ kọfị ahụ. Kedu ihe AI ​​na-eme? Na-atụ aro ngwaahịa ndị ahụ nye onye ọ bụla nke na-ele Keurig anya. Ọ dị ka ịnwe onye inyeaka na - enyere gị aka na - achọ ịkọ ihe ị chọrọ dabere na ihe ịchọrọ, ihe ị na - pịa, na ihe nde na nde ndị ọzọ mere na ọnọdụ gị.
Nwere ike AI nyere gị aka ịchọta ngwaahịa gị zuru oke?
Ndị na-eme nchọpụta na ndị mmepe na-anwa ịza ajụjụ a: Anyị nwere ike ịme onye enyemaka ịzụ ahịa azụmaahịa nke onwe? Maka ugbu a, enwere ngwa abụọ na-adọrọ mmasị nke na-abịaru nso.
Otu bu Macy's On-Call, nke bu ihe ijuanya tupu oge ya eruo, ma tinyekwaa ihe ndi iche iche AI ​​na ndi ahia ahia na ileta ulo ahia brik. Mgbe ndị ahịa gara na ụlọ ahịa Macy, ha nwere ike ịbanye na ekwentị ha ma nweta ọrụ On Call iji jụọ ajụjụ gbasara ngwa ahịa, iwu ha debere, ma ọ bụ nweta ụzọ maka ebe ngalaba ọzọ. Nanị ihe ha ga-eme bụ ịjụ ajụjụ ma ha na-aza ha ozigbo.
A nwalere Macy's On-Call na ụlọ ahịa 10, mana enwebeghị ọganihu karịa ebe ahụ. Agbanyeghị, ọ dị ka ọ na-ekwe nkwa, ha wee soro IBM Watson rụkọọ ọrụ. N'ihi mgbasawanye nke iji chatbots na-arịwanye elu, ọ bụ itinye ego nke nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ha n'ọdịnihu, ma baa uru ịnwa i toomi maka ụlọ ahịa eCommerce nke ọma.
Agbanyeghị, ọhụụ kachasị na kasịnụ bụ ngwa akpọrọ Elly. Elly bụ ihe kacha dị adị nye ezigbo onye enyemaka ịzụ ahịa azụmaahịa - agbanyeghị, ọ ka nọ na mmepe. Ọ bụ AI nke na-enyere ndị ahịa aka ịchọta ngwaahịa ha zuru oke site na ịjụ ọtụtụ ajụjụ, ịhazi atụmatụ, ọnụahịa, na ihe ọ bụla ọzọ ndị ahịa kwuru na ha na-eche. Ọ nọ na ule ule n'oge ahụ, mana ị nwere ike ịnweta enyemaka ya ugbu a n'ịchọta ekwentị gị zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọ ọhụhụ n'ọdịnihu.
Onye enyemaka nke onwe ya maara oru ha n'ime na n'èzí. Ha na-achọkwa ịmara ihe ọmụma dị mkpa gbasara ndị ahịa ha dị ka o kwere mee, iji nyere ha aka ịme mkpebi ịzụta ihe ma hapụ afọ ojuju (na, n'ezie, ịlaghachi maka ndị ọzọ). N'ikpeazụ, ha chọrọ ka nke a mee n'ụzọ nkịtị na nke ọma.
Nsogbu nke iji ndị enyemaka onwe onye mmadụ bụ na ha enweghị ike ịbawanye nke ọma ma jiri ọtụtụ data n'ụzọ bara uru. Ọdịnihu nke ndị na-enyere aka ịzụ ahịa azụmaahịa bụ ijikọta enyemaka na ịhazi onwe onye nke onye inyeaka mmadụ yana ike data na-agba ọsọ na ọsọ nke ọgụgụ isi. Otu ngwa apughi ime ya (ma), mana ijikọta ngwaọrụ ole na ole dị ugbu a nwere ike ịmepe ọkwa ọhụụ maka azụmaahịa eCommerce.
Tags: nkataDomino siamaonye ozi facebookh & mMongoDBonwe stylistsephora
Jake Rheude bụ Director nke Marketing maka Mmezu Red Stag, ụlọ nkwakọba ihe ecommerce nke amụrụ site na ecommerce. Ọ nwere ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na ecommerce na mmepe azụmahịa. Na oge ya n'efu, Jake nwere obi ụtọ ịgụ banyere azụmahịa na ịkọkọrịta ahụmịhe ya na ndị ọzọ.